Hacker inobudirira kubiridzira iyo Nintendo Classic Mini uye kuisa Gnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yekubira inokwanisa kubira iyo Nintendo Classic Mini uye kuisa Gnu / Linux
Kazhinji hapana chimwe chinopenya mu tech nyika pane kukanda mune inonakidza gadget uye kutaura hapana chinogona kubvarurwa kana kushandurwa nemunhu. Izvi zvinoita kuti vese vabiridzi vagadzire mudziyo wakadai kuti uchinjike.
Izvi ndozvakaitika na iyo Nintendo Classic Mini, iyo Nintendo vhidhiyo yemutambo mutambo inodzokorora iyo yekutanga modhi yakatangwa nekambani uye kuti isu tinogona kutotaura izvozvo pamusoro pekuve nemitambo yemavhidhiyo yeNintendo, ine Linux pamoyo wayo.
Iyo Nintendo Classic Mini ikozvino inogona kushanda neiyo GNU / Linux kugovera
MuJapan muparadzi akatanga mu webhusaiti yako seti ye software uye mirairo inogadzira iyo Nintendo Classic Mini inogona kunge iine Ubuntu uye iyo Linux Kernel nekukurumidza uye iine serial tambo inobatana neyemutambo koni. Sezviri pachena iro rekubira kuburikidza serial-USB tambo yakwanisa kupinda mubhuti uye kunyora pamusoro kuitira kuisa linux kernel yakanyorerwa chikuva uye wozoisa vhezheni yeUbuntu yemabhodhi eSBC inoita iyo Nintendo Classic Mini inoshanda zvizere Gnu / Linux system. Izvi zvinodhura zvakanyanya asi kugutsikana kwekutaura kuti iwe wave wekutanga kubira iyi yakavandudzwa mutambo weconsoon wakakosha.
Nehurombo izvi zvinotora nguva kubereka kubvira iwo mirairo kunyangwe iri yeruzhinji iwo akanyorwa muchiJapanese Uye hausi mutauro unotaurwa zvakanyanya muUnited States neEurope, uye unofanirwa kufunga izvozvo Nintendo NES Classic Mini zvikamu zvine mashoma, ndiko kuti, isu tinogona kutakura mutambo weconsoice tobva tamhanya kunze kwekutanga kopi yeNES. Saka vazhinji vanozoshamisika kana vachinyatsoda kuve nerimwe gadget neLinux kana kuchengeta mutambo weconsole uye kutamba zvekare zveupenyu hwese, senge Donkey Kong kana SuperMario Bros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo yekubira inokwanisa kubira iyo Nintendo Classic Mini uye kuisa Gnu / Linux
Yekutanga Beta yeFirefox 51 yabuda
Microsoft inova nhengo nyowani yeiyo Linux hwaro